Medjugorje: Ozi ndi nne anyi di aso na akuku uwa EKPERE NA OZI
Medjugorje: Ozi nke nne anyi di aso na ngwongwo na ala
Paolo Tescione	Edere ya Julaị 18, 2020 Julaị 19, 2020
Ozi sitere na October 30, 1981
Na Poland n'oge na-adịghị anya, a ga-enwe nnukwu esemokwu, mana na njedebe ndị ezi omume ga-emeri. Ndi Russia bu ndi mmadu g’eto Chineke otuto. Ọdịda Anyanwụ enwetala ọganihu, mana na-enweghị Chineke, dị ka a ga - asị na ọ bụghị Onye Okike.
Umu nnem! Soro Jizọs! Ebi ndu o zitere gi! Ọ bụrụ na ị hapụ Jizọs na ihe funahụrụ gị. Ekwela ka ihe nke uwa megharia gi n'ebe Chineke no. Kpachara anya na ndu gi diri Jisos na ala eze Chineke juo onwe unu: a di m njikere ihapu ihe nile ma soro uche Chineke napughi iche? Umu nnem! Kpee ekpere ka Jizọs nye gị obi umeala. Ka ya bụrụ ihe nlere gị niile na ndụ! Soro ya! Gaa n'azụ ya! Kpee ekpere kwa ụbọchị ka Chineke nye gị ọkụ iji ghọta uche ya ziri ezi. M na-agọzi gị.
Machị 25, 1996
Umu nnem! Ana m akpọ gị oku ka ị kpebie ọzọ ịhụ Chineke n'anya karịa ihe niile ọzọ. N'oge a mgbe, n'ihi mmụọ nke ndị ahịa, i chefuru ihe ịhụ n'anya na inwe ekele maka ezi ụkpụrụ, a na m akpọọ gị ọzọ, ụmụaka, ibute Chineke ụzọ na ndụ gị. Ekwela ka Setan dọta gị n’ebe ihe onwunwe dị, kama, ụmụntakịrị, kpebie maka Chineke bụ nnwere onwe na ịhụnanya. Họrọ ndu o bughi onwu nke nkpuru obi. Childrenmụaka, n’oge a nke ị tụgharịrị uche n’ọchịchọ na ọnwụ Jizọs, a na m akpọ gị oku ka ị bie ndụ maka mbilite n’ọnwụ ya na ndụ gị taa na enwetara ọhụụ site na ntụgharị nke ga-eduga gị na ndụ ebighi ebi. Daalụ maka ịza oku m!
Machị 18, 2000 (Mirjana)
Umu nnem! Achọla udo na ọdịmma n’ime ihe nzuzu n’ebe na-ezighi ezi. Ekwela ka obi gi sie ike site n’ihu n’efu ihe. Kpọkuo aha Ọkpara m. Nabata Ya n’ime obi gị. Naanị n’aha nke Ọkpara m ka ị ga-enwe ezi obi na ezigbo udo n’obi gị. Naanị otu a ka ị ga-esi mata ima Chukwu ma gbasaa. A na m akpọ gị oku ka ị bụrụ ndị ozi m.
Ozi e dere n’ụbọchị Ọgọst 25, 2001
Umu nnem, a na m akpoku unu niile ka unu kpebie odido nso. Childrenmụaka, ịdị nsọ ahụ na-abụ ebe mbido n'echiche gị na ọnọdụ niile, n'ọrụ na n'okwu. Yabụ ị ga - etinye ya na iji nwayọ nwayọ nwayọ na ikpe ekpere ma mkpebi maka ịdị nsọ ga - abata ezin’ụlọ gị. Gwa onwe gị eziokwu ma esokwala onwe gị na ihe onwunwe kama na Chineke. Echefula, ụmụ, na ndụ gị na-agafe dị ka ifuru. Daalụ maka ịza oku m.
Ozi e dere na Jenụwarị 25, 2002
Ezigbo ụmụaka, n'oge a, mgbe unu ka na-eleghachi anya n'afọ gara aga, a na m akpọku ụnụ ụmụntakịrị ka unu lebanye anya n'ime obi unu nke ọma ma kpebie ịbịaru Chineke nso na ikpe ekpere. Mụntakịrị, unu ka jikọtara ihe nke ụwa na ntakịrị na ndụ ime mmụọ. Mee ka ọkpụkpọ oku a kpọrọ m taa bụrụkwa ihe nkwalite nye gị ikpebi maka Chukwu na nchigharị ụbọchị niile. Cannot nweghị ike ịgbanwe, ụmụntakịrị, ọ bụrụ na do hapụghị mmehie gị wee kpebie maka ịhụ Chineke na ndị agbata obi n'anya. Daalụ maka ịza oku m.
Nọvemba 2, 2009 (Mirjana)
Childrenmụaka, ụmụm, a nọ m n’etiti ugbu a ka m gosi gị ụzọ nke ga - enyere gị aka ịmara ihụnanya nke Chukwu Lovehụ Chineke n’anya nke mere ka ị nwee mmetuta ya dịka Nna ya na ịkpọku gị dịka Nna. Atụrụ m anya n’aka gị na ezi obi na-ele obi gị anya hụ na ị hụrụ ya n’anya. Ọ bụ nke ikpeazụ ka mmadụ kwesịrị ịhụ n'anya? N'akuku ngwongwo, ugboro ole ka ịrara nye, gọnarị ma chefuo ya? Childrenmụ m, unu ejila akụ nke ụwa duhie onwe unu. Chee nkpuru obi dika ihe kari aru. , Nsacha. Kpọkuo Nna. Ya echere gi, laghachikute ya: Mu onwem no gi n'ihi na o zitere m na ebere ya. Daalụ!
Machị 25, 2013
Umu nnem! Ubochi a ka m na-akpọku gị n’ekpere, mmehie na-adọta gị n’ihe nke ụwa mana abịawo m iduzi gị maka ịdị nsọ na ihe nke Chukwu mana ị na-alụ ọgụ ma na-emebi ike gị na ọgụ dị mma na ihe ọjọọ dị n’ime. gị. Yabụ, ụmụaka, kpesie ekpere, kpee ekpere, kpee ekpere ka ọ bụrụ ihe ọ joyụ nye unu, ndụ unu ga-abụkwa ụzọ dị mfe n'ebe Chineke nọ.
Disemba 25, 2016 (Jacov)
Umu nnem taa ubochi amara a n’otu aka a na m akpo unu oku maka udo. Childrenmụaka, abiawo m ebe ahụ dịka Queen nke Udo na ugboro ole m kpọrọworo unu ka unu kpee ekpere maka udo, n’agbanyeghi obi unu ewela iwe, mmehie na-egbochi gị imeghe kpam kpam n’amara na udo nke Chineke chọrọ inye gị. Ido udo n ’umu m bu nke mbu inwe udo n’obi unu na inye onwe gi kpamkpam nye Chineke na uche Ya. Achọla udo na ọ joyụ n’ihe nke ụwa a n’ihi na ihe a niile na-agabiga. Gbalịsie ike rue ezi obi ebere na udo nke na - esite n'aka Chineke naanị ma otu a ka obi gị ga - ejupụta n'ọ joyụ zuru oke ma ọ bụ naanị otu a ka ị ga - esi bụrụ ndị àmà nke udo n'ụwa a nọ n'ọgba aghara. Abụ m nne gị ma m na-arịọchitere onye ọ bụla n’ime gị arịrịọ. Daalụ maka ị zara oku m.
Ozi e dere na Jenụwarị 25, 2017
Ezigbo ụmụaka! Taa, a na m akpọku gị ka ị kpee ekpere maka udo. Udo di n’obi mmadu, udo diri ezinulo na udo n’uwa. Setan di ike ma choro ime ka unu nile megide Chineke, me ka unu laghachi na ihe nile bu mmadu ma mebie obi unu nile n’ebe Chineke no na ihe nke Chineke.Unu umuaka, kpee ekpere ma lua agha megide materialba-uba nke ndu, igba-okuko nke ndi mmadu na nke onwe. na uwa n’enye gi. Mụntakịrị, kpebie ịdị nsọ, mụ na Ọkpara m Jizọs ga-arịọchiterekwa unu arịrịọ. Daalụ maka ịza oku m.
Eprel 9, 2018 (Ivan)
Dearmụ m, ụmụ m, taa, a na m akpọ gị oku ka ị hapụ ihe nke ụwa, na-agafe: ha na-eme ka ị ghara ịdị na-ahụkarị n'anya nke Ọkpara m. Kpebie nwa m, nara okwu ya ma bie ha. Umu nnem, unu ekelewo m maka ịza oku a na-akpọ m taa.
Nke gara aga Post Gara aga post:Vorara nye ọnya Jizọs: nkwa 13, chaplet na mkpughe nye San Bernardo
Next Post → Post ozo:"Ave Maria" nye Nwanyị anyị - a na m agwa gị ihe kpatara ị ga-eji na-ekwu ya kwa ụbọchị